DF oo ka hadashay gefkii France-siisku u geystay Nabi Muxamed NNKH - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/DF oo ka hadashay gefkii France-siisku u geystay Nabi Muxamed NNKH
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay ficillada xun ee France-siisku ugeystay Nabigeena Muxamed NNKH.
War saxaafadeed ka soo baxay Dowladda ayaa u qoran.
wladda Federaalka Soomaaliya waxay ka xun tahay in lagu xadgudbo caqiidada iyo muqdasaadka dadka Muslimiinta ah oo uu ugu horreeyo Suubanaheenna Nabi Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyada oo marmarsiyo laga dhiganayo xorriyadda hadalka.
RW oo xilalka u kala wareejiyay Wasiirrada Amniga iyo Arrimaha gudaha
RW Rooble oo casuumaad u fidiyay golaha Shacabka